Ahoana ny fanaovana ny litera iPad ho sahy | Vaovao IPhone
Fantatra hatrany i Apple tamin'ny famoronana fitaovana mora ampiasaina ary noho izany dia manome lanja lehibe ny rafitra fiasa izay volavolainy ho an'ny tsirairay amin'ireo fitaovany, na birao finday, solosaina finday na fitaovana finday toa ny iPad izy ireo. iPhone na iPod. Touch. Na amin'ny OS X na iOS, samy manana ny rafitra miasa safidy hanatsarana ny fahazoana miditra amin'ireo olona manana fetran'ny fahitana na ny fihainoana. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia hanazava ny fomba ahafahantsika mametraka ireo litera aseho eo amin'ilay fitaovana amin'ny sahisahy.
Endri-tsoratra sahisahy amin'ny iPad
Voalohany indrindra dia tsy maintsy mankany isika Fikirana, rehefa mandroso isika isaky ny maniry ny manova ny masontsivana rehetra momba ny fikirakirana ny fitaovantsika.
Manaraka izany dia handeha ho any amin'ilay faritra isika General.
Ao anatin'ny General, ao amin'ny sakana fahatelo amin'ny safidy, dia tsindrio eo izahay Accessibility hanokatra ny menio izay ahitanao safidy azo ampanjifaina ho an'ny kilemaina amin'ny fahitana na ny sofina.
Ao amin'ny sakana faharoa amin'ny safidy hitantsika amin'ny toerana faharoa Bold text miaraka amin'ny kiheba ahafahana mamela azy. Raha vantany vao avelantsika ny safidy, ny iPad dia hanery anay hamerina ny iPad mba hiasa ireo fanovana.
Raha vantany vao natomboka ny fitaovana, dia hojerentsika amin'ny alàlan'ny fanokafana rindranasa samihafa ny fomba fisehoan'ny taratasy rehetra (hafa ankoatry ny sary) amin'ny fahasahiana, mampitombo ny mifanohitra amin'ny aoriana mba hahafahan'ny olona manana olana amin'ny fahitana mampiasa ilay fitaovana amin'ny fomba mora kokoa ary tsy manandrana maka sary an-tsaina ny atiny an-tsoratra asehony amintsika.
Raha amin'ity fanovana ity dia mitohy tsy mahita tsara ny lahatsoratra aseho amin'ny efijery ireo olona manana olana ara-pahitana. safidy hafa azo jerena ao amin'ny iOS ny fampitomboana ny haben'ny endritsoratra izay mampiseho. Ity safidy ity dia aseho alohan'ny Bold Text.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fanaovana ny litera iPad ho sahy
Ity no fomba hidirana amin'ny seranan-tsambo diagnostika an'ny Apple Watch
Ireo ve no sary voalohany amin'ny iPhone 6s?